WatchOS vhezheni 7.0.3 yakaburitswa kugadzirisa bugs mu Series 3 | Ndinobva mac
WatchOS 7.0.3 yakaburitswa kugadzirisa bugs mu Series 3
Shanduro nyowani dzeApple Watch dzinogara dzichiwedzera nhau uye muzviitiko zvakawanda kugadziriswa kwezvikanganiso kana zvikanganiso zvakaonekwa. Mune ino kesi kusvika kwe watchOS 7.0.3 ine hukama chaihwo nekugadzirisa rimwe dambudziko Inotariswa mushanduro 7.0.2 yemamwe Apple smartwatch mamodheru.
Zvisingatarisirwi reboots pane izvi Apple Watch zvakakonzera kuvhurwa kweiyi nyowani vhezheni, 7.0.3 ndeye Apple Watch Series 3 chete, saka haiwanikwe kune mamwe mamodheru. Iyo yekuvaka nhamba iyo iyi nyowani vhezheni ine 18R410.
Apple inopindura nyaya nekugadzirisa
Zvakashata sezvazvingaite sekunge isu tinofanirwa kugadzirisa zvishandiso zvedu kazhinji, tinogona kuzvitaura izvi zvinogara zvakanaka sezvo shanduro nyowani dzakaburitswa neApple dzinogadzirisa zviputi Uye pachiitiko ichi paive nechinetso chikuru icho vezvenhau vakaita sekunge vasina kucherechedza (sezvo pasina zvinyorwa nezvazvo) uye izvo zvakakonzera kuti Apple Watch Series 3 itangezve zvisingatarisirwi.
Kune avo vane Apple Watch Series 3 ivo vanogona ikozvino kugadzirisa kune yazvino vhezheni inowanikwa uye kune izvi vanogona kuwana mukana wemenyu General> Software Kwidziridzo, kana vasina otomatiki inogadziridzwa akamiswa. Kana vaine izvi zvitsva zvinoshanda, wachi inenge yatove neiyi nyowani vhezheni yakaiswa. Rangarira kuti mawatchOS vhezheni 7 zvichienda mberi anowirirana ne Series 3, 4, 5 mamodheru uye zvigadzirwa zvechangobva kuitika zvakatangwa neApple, Series 6 uye Apple Watch SE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 7.0.3 yakaburitswa kugadzirisa bugs mu Series 3
Vezvenhau kana ivo vaiziva nezvedambudziko iri, nekuti zviuru zvevashandisi vaizvishora kuburikidza nenharaunda yeApple.
Iyo Outlook yekuvandudza neye nyowani dhizaini ye macOS yave kuwanikwa
Maitiro ekuwedzera ekuwedzera anoshanda skrini nguva paApple Watch